Deeqda waxbarasho ee Tufts ee Muwaadiniinta Mareykanka iyo Ardayda Caalamiga ah 2020 2022
Deeqaha Tufts ee Muwaadiniinta Mareykanka iyo Ardayda Caalamiga ah 2020
Haddii aad codsaneysid kulliyad markii ugu horreysay ama aad raadineyso inaad dhammaystirto shahaadadaada, Jaamacadda Tufts waxay leedahay barnaamijyo heer sare ah oo aad u sarreeya oo lagu taageerayo waxbarashada ardayda.
Barnaamijka Gargaarka Maaliyadeed waxaa loogu talagalay in lagu taageero dhammaan ardayda u baahan dhaqaalaha ee ku socda jidka u horseedaya himilooyinkooda shaqsiyeed iyo kuwa shaqo.
Tufts waxay bixisaa in ka badan 90 shahaadada koowaad iyo 150 barnaamijyada qalin-jabinta iyada oo loo marayo seddexdeeda iskuul - Iskuulka Fanka iyo Sayniska, Iskuulka Injineerinka, iyo Iskuulka Matxafka Farshaxanka Fiican (SMFA).
Jaamacad ama Urur: Jaamacadda Tufts
Heerka Koorsada: Wax kasta
Jinsiyada: Muwaadin Mareykan ah iyo Ardayda Caalamiga ah
Abaal marinno ayaa lagu geli karaa Mareykanka.
Dalalka u Qalma: Codsadayaasha Qaranka iyo kuwa Caalamiga ah way dalban karaan
Koorso La Aqbali karo ama Maado Abaalmarinta waxaa lagu bixin doonaa shahaado kasta oo ay ka bixiyaan saddexda dugsi ee Tufts - Fanka iyo Sayniska, Injineernimada, Matxafka Farshaxanka Fiican (SMFA).
Barnaamij kasta oo ka socda Tufts wuxuu leeyahay shuruudaha u-qalmitaanka u gaarka ah. Marka kahor intaadan dalban koorso waa inay buuxisaa dhammaan shuruudaha u-qalmitaanka ee dugsiyada Tufts.
Iskuulka Fanka iyo Sayniska
Iskuulka Matxafka Farshaxanka Fiican ee Tufts (SMFA ee Tufts)
Sida loo Codso: Si aad u hesho deeq waxbarasho Tufts, codsadayaashu waa inay qaataan gelitaanka koorsooyin kasta oo shahaado ah sida ardayga sanadka koowaad oo dhammaan soo gudbi qalabka loo baahan yahay ku xusan arjiga.
Fiiro gaar ah: Musharrixiinta waa inay u soo gudbiyaan dhammaan dukumiintiyada Adeegga Dukumiintiyada Hay'adda (IDOC)
Taageerida Dukumentiyada: Codsadayaasha waxaa looga baahan yahay inay buuxiyaan dukumiintiyada lagama maarmaanka ah:
Buuxi FAFSA. Lambarka Tufts waa 002219.
Dhameystir Adeegga Deeqaha Kuleejka (CSS) Macluumaadka Lambarka Tufts waa 3901.
Shuruudaha Ogolaanshaha: Intaadan codsan shahaadada, waxaad u baahan tahay inaad iska hubiso dhammaan shuruudaha waxbarasho ee Tufts.
Shuruudaha Luqadda: Haddii Ingiriisigu aanu ahayn luqadda ugu muhiimsan, markaa imtixaanka luqadda Ingiriisiga ayaa loo baahan yahay. Tufts waxay ogolaatay inay qaadato dhibcaha luuqada Ingiriisida ee iskeed loo soo sheegay. Imtixaannada luuqadda Ingiriiska ayaa looga baahan yahay sida TOEFL - 100, IELTS - 7, PTE - 68, iyo Duolingo - 120.
Jaamacadda Tufts waxay ka caawisaa ardayda inay cagta ugu fiican saaraan tartamada saamiyada sare. Ardaydu way hubin karaan dhammaan deeqaha waxbarasho iyo Fursadaha Wehelnimo halkan.
ugu dambaysa ee arjiga: Isbedelada.
Deeqda Masters Deeqaha PhD Dibedda Ku Baro Iyada oo Deeq waxbarasho la siinayo Ka hooseeya Deeqaha waxbarasho Deeqaha waxbarasho ee Mareykanka Shahaadooyinka Maraykanka
Previous Post:$ 25,000 Deeq waxbarasho oo loogu talagalay Ardayda ka socota Mareykanka, Kanada & Mexico 2020
Post Next:12,500 Shahaadada Jaamacadeed & Shahaadada Caalamiga ah ee Jaamacadda ETS, USA 2020